प्रतीकहरू सम्पादन गर्नुहोस्
प्रतीक सेटमा प्रतीकहरू थप गर्नका लागि, प्रतीक सेटहरू सम्पादन गर्नका लागि, वा प्रतीक नोटेसनहरू परिमार्जन गर्नका लागि यो संवाद प्रयोग गर्नुहोस्. तपाईँ नयाँ प्रतीक सेटहरू परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ, नामहरू प्रतीकमा प्रदान गर्नुहोस्, वा हट्दै गरेको प्रतीक सेटहरू परिमार्जन गर्नका लागि
हालको प्रतीकको नाम चयन गर्नुहोस्. प्रतीक, प्रतीकको नाम, र सेट जुनमा प्रतीक सम्बन्धित छ जुन संवाद बाकसको तलको बायाँ पूर्वदृश्य फलकमा प्रदर्शन हुन्छ ।
पुरानो प्रतीक सेट
यो सूची बाकसले हालको प्रतीक सेटको नाम समावेश गर्दछ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ बिभिन्न प्रतीक सेट पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ
हालको प्रतीक सेटमा प्रतीकहरूका लागि नामहरूको सूची. सूचीबाट नाम चयन गर्नुहोस् वा नयाँ थप प्रतीकका लागि नाम टाइप गर्नुहोस्
नयाँ प्रतीक थप गरिँदै
प्रतीक सेटमा प्रतीक थप गर्न, फन्ट बाकसमा फन्ट चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्रतीक फलकमा एउटा प्रतीक क्लिक गर्नुहोस् । प्रतीक बाकसमा, प्रतीकका लागि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् । प्रतीक सेट सूची बाकसमा, प्रतीक सेट चयन गर्नुहोस्, नयाँ प्रतीक सेट सिर्जना गर्न नयाँ नाम टाइप गर्नुहोस् । तपाईँले चयन गर्नुभएको प्रतीक दायाँ पूर्वावलोकन फलकले प्रर्दशन गर्दछ । थप्नुहोस् र त्यसपछि ठीक छ क्लिक गर्नुहस् ।
प्रतीकको नाम परिमार्जन गरिँदै
प्रतीकको नाम परिवर्तन गर्न, पुरानो प्रतीक सूची बाकसमा पुरानो नाम चयन गर्नुहोस् । र त्यसपछि प्रतीक बाकसमा नयाँ नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् । तपाईँले परिमार्जन बटन क्लिक गर्नु अगाडि पूर्वावलोकन सञ्झ्यालमा आवश्यक क्यारेक्टर छ कि छैन जाँच गर्नुहोस् । ठीक छ बटन क्लिक गर्नुहोस् ।
नयाँ प्रतीक सेट निर्माण गरिँदै
नयाँ प्रतीक सेट निर्माण गर्नका लागि, यसका लागि नाम टाइप गर्नुहोस् प्रतीक सेट सूची बाकसमा र कम्तिमा एउटा प्रतीक थप गर्नुहोस्. क्लिक गर्नुहोस् ठीक छ संवाद बन्द गर्नका लागि. नयाँ प्रतीक सेट अब नयाँ नामको तल उपलब्ध छ ।
हालको फन्टको नाम प्रदर्शन गर्नुहोस् र तपाईँलाई बिभिन्न फन्ट चयन गर्न सक्षम गर्दछ.
यदि तपाईँले प्रतीक नभएको फन्ट चयन गर्नु भयो भने फन्ट सूची बाकसमा, तपाईँ युनिकोड सबसेट चयन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँको नयाँ वा सम्पादित प्रतीक अवस्थित गर्नका लागि. जब सबसेट चयन गरिन्छ, सबै प्रतीकहरू यो सबसेट सँग सम्बन्धित हालको प्रतीक प्रतीक सूचीको माथि प्रदर्शन हुन्छ.
हालको टाइपफेस प्रदर्शन भयो. तपाईँ टाइपफेस सूची बाकसबाट एउटा चयन गरेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ
हालको प्रतीक सेटमा दायाँ पूर्वदृश्य सञ्झ्यालमा देखाइएको प्रतीक थप गर्नका लागि यो बटन क्लिक गर्नुहोस्. यो नामको तल बचत गरिन्छ जुन प्रतीक सूची बाकसमा प्रदर्शन गरिएको थियो. तपाईँले प्रतीक वा प्रतीक सेट तलको नाम निश्चित गर्नुपर्दछ यो बटन प्रयोग गर्न सक्षम हुन. नामहरू एकचोटि भन्दा बढी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
बायाँ पूर्वदृश्य सञ्झ्यालमा देखाइएको प्रतीकको नाम बदल्नका लागि यो बटन क्लिक गर्नुहोस् (पुरानो नाम पुरानो प्रतीक सूची बाकसमा प्रदर्शन हुन्छ) नयाँ नाम सँग जुन तपाईँले प्रविष्ट गर्नु भएको थियो प्रतीक सूची बाकसमा
अर्को प्रतीक सेटमा प्रतीक लैजाँदै
उदाहरणका लागि, ठुलो ALPHA पठाउनका लागि "Greek" सेटबाट "Special" सेटमा, पुरानो सेट (ग्रीक) चयन गर्नुहोस् र ALPHA प्रतीक दुई माथिल्लो सूची बाकसहरू प्रयोग गरि. प्रतीक बायाँ पूर्वदृश्य सञ्झ्यालमा देखिन्छ.प्रतीक सेट सूची बाकसमा, चयन गर्नुहोस् "Special" सेट. क्लिक गर्नुहोस् परिमार्जन र पछि ठीक छ. ALPHA प्रतीक अब मात्र "Special" प्रतीक सेटमा छ ।
हालको प्रतीक सेटबाट बायाँ पूर्वदृश्य सञ्झ्यालमा देखाइएको प्रतीक हटाउनका लागि क्लिक गर्नुहोस्. त्यहाँ सुरक्षा क्वेरी हुँदैन. प्रतीक सेटको अन्तिम बाँकी प्रतीक मेट्दै साथसाथै प्रतीक सेट पनि मेट्नुहोस् ।
तपाईँले रद्द पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ संवाद बन्द गर्न कुनै पनि परिवर्तनहरू बचत नगरिकन जुन सुकै समयमा पनि
Title is: प्रतीकहरू सम्पादन गर्नुहोस्